mairie-antananarivo – Ambohijatovo : Fandrodanana trano
auteur 13 martsa 2017
Araka ny « ARRETE MUNICIPAL N° 148- CUA/CAB .17 portant démolition de la construction édifiée sur une zone inconstructible sur la propriété dite « MIHARY » TN°58.965-A SISE à Ambohijatovo » dia nidina teny an-toerana ireo tompon’andraikitra avy eto anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra nanatanteraka ny fandrodanana.
Dingana maro no efa nolalovana nialohan’izao sehatry ny fandrodanana izao. Vao nanomboka mantsy ny fanamboarana no efa tsinjon’ny kaominina izao fanorenana tsy ara-dalàna izao. Tamin’izany no nilazan’ny tompon’ny trano fa hanatsahatra ny asa izy ireo. Volana vitsy taty aoriana anefa dia trano lehibe mitondra rihana roa, « betonné » izay efa nitafo no niorina teny an-toerana. Niakatra tribonaly ny raharaha ka resy ireo tompon’ny trano. Nanomboka tamin’io fotoana io dia nanome fampitandremana azy ireo ny avy teto amin’ny Kaominina saingy mbola nanohy ny asa hatrany izy ireo ka izao niafara amin’ny didy fandrodanana izao.
Tamin’ny folo ora maraina ireo mpitandro filaminana sy mpamonjy voina ary ireo ekipa avy ao amin’ny sampan-draharaha teknikano nanatontosa ny fandrodanana. Nandeha am-pilaminana izany asa izany na dia nisy fahasarotana ihany teny am-piandohana satria dia tsy nanaiky ny tompon’ny trano. Niantso vaditany sy mpisolo vava moa ireto farany ka dia teo imason’izy ireo no nandrodanana ny trano.
Tokony ho tamin’ny iray ora teo moa dia voatery nahato ny asa satria dia nanao fangatahana fampihatoana fandrodanana ny mpisolo vavan’ny tompon-trano. Araka izany dia nijanona kely ny raharaha fa miandry indray ny didy izay havoakan’ny tribonaly.